Nagu saabsan - Dongguan Walley Makiinado Makiinado Teknolojiyad Co., Ltd.
Dongguan Walley Mashiinka Teknolojiyada Co., Ltd. waxaa la aasaasay bishii Juun 2002, kana madaxbanaan mashiinada qianrunshun waaxda suuqa dibada. Waxay ku taalaa Changping Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha. Waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo leh awood dhammaystiran oo xoog leh xagga saxitaanka qaybaha mashiinnada saxda ah, naqshadeynta qalabka, horumarinta iyo wax soo saarka, iyo naqshadeynta hiitarka iyo horumarka. Nidaamyadeeda wax soo saar ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mashiinka saxda ah ee CNC, falanqaynta latheynta CNC, iyo sameynta shaabadaynta, riveting, isu imaatinka, iwm. Badeecadaha waxaa ka mid ah: qalabka qalabka caafimaadka, qalabka isgaarsiinta, ka shaqeynta qalabka baabuurta, soo saarista alaabada militariga, qalabka hiitarka farsamada gacanta iyo qaybaha kale.
Adeeg tayo sare leh iyo sumcad wanaagsan, Wally wuxuu si isdaba joog ah ugu kobcayaa warshadaha mashiinka saxsan ee CNC. Kaliya maahan inay sii wanaajiso hagaajinta qaybaha aan caadiga ahayn, laakiin sidoo kale waxay horumar weyn ka sameysaa habka saxda ah ee habka wax lagu beddelo, habka wax soo saarka hiitarka, farsamaynta qalabka saxda ah, iwm, iyadoo la siinayo adeegyo qiimo leh macaamiisha si ay u dhammaystiraan iibsi hal-joogsi ah.
Waxaan marwalba u hogaansanahay mabda'a ah inaan siino macaamiisha wax soo saarka ugu tayada fiican iyadoo lagu saleynayo qiime macquul ah. Waxaan xakameynaa tayada wax soo saarka iyadoo la isku darayo "ka hortagga" iyo "kormeerka", waxaan siineynaa tignoolajiyad tayo leh oo lagu kalsoonaan karo oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay soo saarista, galbinta mashiinka saxda ah ee CNC, saxitaanka saxda ah iyo shaabbadda shaabadda, oo dhameystir kalsoonidaada.
Tacliinta iyo tababbarku waa habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo wax soo saarka hibada. Waxaan si joogto ah u qabannaa aqoon-isweydaarsiyo tayo sare leh iyo shirar tayo sare leh oo tayo leh si loo horumariyo xirfadaha mihnadeed ee shaqaalaha tayada leh, si loo barto teknolojiyaddii ugu dambeysay loona buuxiyo shuruudaha xirfadeed ee shaqooyin kala duwan.
Tayada wanaagsan waa dabeecad wanaagsan, tayada wanaagsan waa baacsiga Wally sidii had iyo jeer!